Sidee khariidadda dunida ee 1922 - Geofumadas
Disember, 2013 Cartografia, Politics iyo Dimuqraadiyadda
Daabacaaddan ugu dambeysa ee National Geographic waxay keenaysaa laba mowduuc oo aad u xiiso badan:
Dhanka kale, warbixin balaaran oo ku saabsan habka hannaanka geedi socodka iyadoo la adeegsanayo nidaamyo qabasho lays.
Tani waa wax a collectible, sharxaya kakanaanta keentay shaqada Wajiyada ee Mount Rushmore ee South Dakota iyo frieze ilaahyada Hindu la saaxiibbadood dumar ah ee Rani Ki Vav, ka degay sidoo qarnigii kow iyo tobnaad ee galbeedka India.
shayga kale ee collection of edition tani waa guuradii map of 125 sano ah, oo ka kooban nuqul ka mid ah 50 X 75 sentimitir Adduunka map tixraac guud ee hore ee National Geographic Society, oo lagu daabacay December 1922 oo ka tarjumaysa ka isbeddel lama filaan ah oo horrantii qarnigii labaatanaad ka dib markii dagaal World First.
Waa arrin xiiso leh oo maadooyinka maadooyinka ah ee aan si adag uga muuqannay fasalka Waxbarashada Bulshada ee Ninth Degree ee Machadka Alfonso Guillén Zelaya. Khariidadani waxay hoos u dhigeysaa xuduudaha siyaasadeed ee Europe iyo Bariga Dhexe ka dib markii Heshiiskii 1919. Waxay ahayd wakhtigii Jarmalka la waayay uu ahaa sheyga lagu kalsoonaan karo, dhulkeedana ku yaalla Afrika iyo Pacific ayaa u gudbay gacmaha guusha. Daraasaduhu waxay gaadheen koonfurta iyo waqooyiga, inkasta oo badda weyn ee Arctic iyo Antarctic ay weli ka muuqdaan baraf badan oo aan la ogeyn.
Waa hubaal in ay jirtay sawir gacmeed dheeri ah, laakiin National Geographic waxay ahayd guul weyn in la daabaco khariidad "rasmi ah" oo ah sida natiijada dagaalkii koowaad ee adduunka uu ahaa, kaas oo afartii sano celcelis ahaan celcelis ahaan loo dhinto 6,046 qof maalin kasta. Khariidada waxaad ku arki kartaa waxyaabo xiiso leh oo sidan uun lagu arki karo, sida:
Iran ayaa wali lagu magacaabaa Persia. Horeyba waa tirakoobka waxa dhici doona in loogu yeero Midowga Soofiyeeti ka dib isbeddelka Boqortooyada Sare. Turkiga ayaa sidoo kale soo ifbaxday ka dib markii uu burburay Boqortooyada Ciraaq. Iyo kala dirista Awoodda Austraaniyaanka Australiya waxay ka muuqanaysaa Gobolka Austria iyo Jamhuuriyada Hungary, Czechoslovakia iyo Yugoslavia.
Waxaad ka arki kartaa xilka Japan badan oo Islands Pacific ah; booskaas in isaga siiyey hawada ee samatabbixiyahayga, oo waxay noqdeen daalim World War II. Weli waxaan xusuusan karaa version bidix ee aan macalinka, marka aynu soo sharaxnay in Japan duulay hawada ah xoraynayaa ku qabsado by dhulka Rayaale British iyo Faransiis weyn, ka dibna u halmaanteen iyo halaagsameen isagoo colonizer kale kasbaday daadsanaanta weyn la wiilasha weyn.
Khariidaddu waxay muujinaysaa waddooyinka hawada ee daawada, taas oo markaa ay aheyd sheeko sida muuqata khariidada. Waddooyinka hawada ee muuqda ayaa muuqda, kuwaas oo ah kuwa gaaban oo dhexdhexaad ah ee qaaradda. Wareegtada ayaa tilmaamaya jidadka la oggol yahay laakiin aan ku jirin hawlgal, halkan ka fiiri Buenos Aires - Rio de Janeiro, iyo qayb ka mid ah dhammaadka Brazil ee Senegal ee Afrika. Waddooyinka kale ee shukaansiga ayaa kaliya u muuqda sidii loo duulay laakiin aan ganacsi ahaan loo hirgelin.
Khariidaddu waxay leedahay marxalado yaryar oo mawjadaha badda, dabaysha iyo cufnaanta dadweynaha. Kuwa ugu sarreeya waxay ka sarreeyaan dadka 400 halkii kiilomitir oo labajibbaaran, taas oo ah qiyaasta barafka Shiinaha, koonfurta Japan, bartamaha Hindiya iyo woqooyiga Faransiiska. Inta u dhaxaysa 100 iyo 400, halkii mile labadii diyaargarow waa bartamaha Yurub, Hindiya, Shiinaha, iyo Mareykanka. Waqtigaas kadibna Mareykanka ma aysan aheyn, marka laga reebo dalka kaliya ee warshadaha Mareykanka ah, laakiin ka qaybqaadashadu waxay u furtay habka ay u doorto adduunka oo dhan sida dayn-bixiye iyo gumaysi cusub.
Waxa xiiseynaya, waxa ay ina xusuusineysaa sida iskahorimaadka loo dhammeeyey iyo sida shuruudaha loo diyaariyay labaad labaad oo qarxay sanadihii 17 oo kaliya.
Si aad u iibsato version dijital ah:
Anigu ma hayo fikrad haddii khariidadu ay ka timid midaan ama kaliya ee daabacaadda daabacan.
Post Previous«Previous 2014 - Saadaal kooban oo ah qaabka Geo
Post Next Koorsooyinka MappingGIS: ugu fiican waxaa jira.Next »